गर्भावस्था शासनको समयमा मोल्सको मजाई पृष्ठ
गर्भावस्थाको बखत नयाँ नेविसहरू प्राय: दोस्रो त्रैमासिकमा उनीहरूको उपस्थिति देखिन्छन् वा परिवर्तन गर्दछन्। धेरै मानिसहरू डराउँछन्, विश्वास गर्छन् कि गैर-deignign page33 वर्णन इकाईहरूमा मेलानोमाको पुनर्जन्म हो - खतरनाक क्यान्सर।
गर्भावस्थाको अवस्थामा, मालाको संख्यामा परिवर्तन प्राय: हार्मोनको बदलिएको स्तरहरूको साथ सम्बन्धित हुन्छ, जुन यस अवधिमा शरीरको विशेषता हो। यो पनि भन्न सकिन्छ: गर्भावस्थाको क्रममा नयाँ जन्मखुर्मत स्पटसहरूको उपस्थितिले संकेत गर्दछ कि बच्चाको प्रतीक्षा अवधिमा शरीरमा झर्छ। नयाँ मोल्सले जुन देखा पर्ने अपरिचित पुष्टिकरण हो।
गर्भावस्थामा भइसकेकाहरूको शरीरमा बेपत्ता पारिएका नर्सहरू पनि दोहोर्याइएको अवस्थामा पनि थाहा पाइएको छ। यो हार्मनल प्रणालीको कामसँग सम्बन्धित छ। केही समय पछि, जब हारमोनल पृष्ठभूमि सामान्य रूपमा आउँछ, केही मोल्सले बिस्तारै हराउँछ, अरूहरू - शरीरमा बाँच्नुहोस् र गर्भावस्थामा सम्झना गर्दछन्, जसले तिनीहरूको उपस्थितिको बारेमा सम्झाउँछन्।
गर्भावस्थाको बखत हिमाली अँध्यारो गर्दै
अर्को प्रश्न जुन गर्भवती महिलाहरू बकवासको अँध्यारो हो। यो गर्भावस्थाको समयमा शरीरको पुनर्संरचनाको अवधिमा पनि एक प्राकृतिक घटना हो। त्यस्ता परिवर्तनहरू वास्तविकताले मेलानिनको संख्या बढाउँदछ भन्ने तथ्यबाट वर्णन गरिएको छ - पिग्मेन्ट, जसले छालाको छायाँ दिन्छ। Nevists pigness कोषहरु बाट ठ्याक्कै खोलिएको तथ्यलाई विचार गर्दै, उनीहरूको अँध्यारोको व्याख्या गर्न गाह्रो छैन - मेलानिन छालामा (प्रदर्शन) प्रकट गर्न थाल्छ, तिनीहरू अँध्यारो हुन्छन् छाती, नाभी रेखा र उपलब्ध pignge pights मोल।
गर्भावस्थामा गैर-नव्र्यहरूको आकार र आकारमा परिवर्तन
तथ्यको बावजुद प्रायः नयाँ गैर-खोजीकर्ताहरू, बेग्लाबेग्लैको उक्लोपना शरीरको हर्मोनल पेस्ट्रिकिकासँग सम्बन्धित छ, यो गर्भावस्थामा ध्यान नदिई नै गर्नाले, गर्नाले यो गर्भावस्थामा सताउन असम्भव छ। के भएको महिलालाई के गर्नुपर्छ?
नयाँ जन्म पत्रहरू जुन बच्चाको अपेक्षाको बखत सचेत हुनुपर्दछ यदि उनीहरूको शरीरमा अवस्थित रहेको भन्दा पूर्ण रूप र आकारको भन्दा फरक छ भने। उनीहरू भन्छन्, "पहाडी अनौंठो" वा "अनौठो देखिन्छ", त्यो हो, अरूको पृष्ठभूमिको विरुद्धमा भाग लिनुहोस्।
कुन डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न?
यो धेरै सम्भव छ कि विशेषज्ञहरूको भ्रमणले सबै चिन्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ, किनकि मलानोमामा Nevosvov किनकि नेभानोभको पुनर्जन्ममा प्राय: होइन।
मोल्ल गर्भवती महिलाहरू हटाउन सम्भव छ?
एक नियम को रूपमा यी शरीर मा साना खैरो रशहरु छन्, जुन विशेष कोशिकाको विकासको प्रक्रियामा गठन हुन्छ - मेलानोसाइट्स। यो यी कोषहरू हुन् जुन छाला पेन्ट गर्ने पदार्थको उत्पादनहरूको लागि जिम्मेवार छन्। मोल्सले अचानक र कुनै उमेरमा देखा पर्न सक्छ, र केहि आफैं पनि हराउन सक्छन्। प्राय: तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ कि सजिलोको साथ मोल्सले क्यान्सर ट्यूमरमा गइरहेको सुन्न सक्छ, तर प्राय जसो केसहरूमा, नरीजरीहरू साधारण बेनुन नेपलामहरू हुन्। र यदि होईन भने, त्यसपछि समस्याबिना वस्त्रहरू शल्य चिकित्सा उपचार छोडेर जाँदैछन्।
कहिलेकाँही यो हुन्छ गर्भवती महिलाहरूमा मोल्दछ र आकारमा बढ्न थाल्छ। र भावी आमाले यस प्रश्नलाई चिन्ता दिन्छ: के गर्भवती महिलाका लागि मोल्स हटाउन यो सम्भव छ? आफैलाई शान्त गर्न र बच्चालाई हानी गर्नु हुँदैन, एक महिलालाई थाहा हुनुपर्दछ कि मालाहरू फरक छन्, र विशेष गरी गर्भावस्थाको लागि विशेष दृष्टिकोणको आवश्यकता छ।
साधारण सानो मोल्सको थपमा छालाको अतिरिक्त, तपाईं अरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, जुन छालामा मेलानोसासाइट कोषहरूको स्थान भन्दा फरक छ।
धेरै प्राय: पहाड एक वार्टको साथ भ्रमित हुन सक्छ। तर समयसँगै, मर्ट आकारमा बढ्छ, असमान सतह र संकुचित आधार हुन्छ। यो भन्न सकिन्छ कि मर्ट जस्तै यदि यो छालामा सपाट हुन्छ। तर बढ्दो आकार वा रंग परिवर्तनले असफलताको बारेमा कुरा गर्दैन। तर सौंदर्यशास्त्रको खातिर, त्यस्ता रेखाहरू हटाउन सकिन्छ।
महिलाहरूले गर्भवतीको समयमा तिनीहरूको मोल्ल गर्न थालेका छन्। यो हर्मोनहरूको हर्मोन गर्ने र शरीरको पुनर्संरचनाको बृद्धि भएको छ। बच्चाको जन्म पछि दुर्लभ कष पनि छैन। तर हरेक महिला पहिले एक बर्बादी विरोधी वा ओन्कोलोजिस्ट हुनु पर्छ, र त्यसपछि सर्जनमा भाग्नु पर्छ। र कुनै पनि केसमा कुनै नसमा मानिसका मार्गहरू द्वारा मोल्सबाट छुटकारा पाउन को लागी: यसले भविष्यमा आमा र बच्चालाई हानि गर्न सक्छ। अपील को कारण एक तिल वा यसको क्षति मा कष्टकर संवेदनाहरु को साथै रंग र फारममा परिवर्तन हुनु पर्छ।
माउलहरूको सुरूवातको अवधिमा मालाहरूको उपस्थिति, घटना भयो जुन गर्भवती महिलाहरूको सामना गरिन्छ। केहि केसहरूमा त्यस्ता गठनहरूले आफैंलाई देखाउँदैनन्, अरूमा उनीहरूले महिलालाई धेरै असुविधा ल्याउँछन्। त्यहाँ एक कानूनपर प्रश्न छ, के गर्भावस्थामा विल हटाउन सम्भव छ? यस प्रश्नको कुनै स्पष्ट उत्तर छैन, यो सबै Nesus द्वारा "व्यवहार" मा निर्भर गर्दछ।
किन नगदहरू गर्भावस्थामा देखा पर्दछ
गर्भावोणको साथ एक विशाल हार्मोनल पेस्ट्रोकासँगै देखा पर्यो, तिनीहरू शरीरका प्रयासहरू अस्तित्वको सर्तहरू लिनका लागि अनुकूल छन्। यस समयमा थप भूमिका एक अतिरिक्त अल्ट्राभाइयोलेटको अधिक खेल्न वा एक सोलशियमको भ्रमण गर्न सक्दछ।
यी संरचनाहरूले फिक्का गुलाबी रंग, खैरो, पनि कालो हुन सक्छ। फ्ल्याट चिल्लो स्पिक जस्तो देखिन्छ, वा छालाको सतहमा प्रदर्शन गर्नुहोस्।
गर्भावस्थाको समयमा उत्पन्न भएकोले चिन्तालाई बच्चाको जन्म पछिको शिक्षाबाट मुक्त नगरेकोमा देखा पर्न सकेनन, त्यसैले डाक्टरहरूले गर्भवतीमा शिक्षाबाट मुक्त गरिनन्। हटाएर हटाउने प्रश्न उठ्छ यदि Nesus (त्यसैले चिकित्सा शब्दावलीमा माउन्टेन भनिन्छ) एक असहज स्थानमा अवस्थित छ जहाँ यो प्राय जसो घाइते हुन्छ।
<< p> आफैमा, गर्भावस्थाको समयमा ग्रेलसको उपस्थिति कुनै असर हुँदैन, तर उनीहरूलाई दुबै विशेषज्ञहरू र सबैभन्दा गर्भवती महिलाबाट अवलोकन आवश्यक पर्दछ।
कहिलेकाँही पुरानो र नवजात र नवजात र निर्जीव शिक्षा परिवर्तन सुरु हुन्छ। यस मामलामा यो गम्भीर रूपमा चिन्ता लिनु आवश्यक छ, हार्मोनल पेस्ट्रोकटको पृष्ठभूमिमा ट्रोलहरूको रूपान्तरणले यसलाई घातक ट्युमरमा पुनर्जन्म लगाएको खतरा निम्त्याउन सक्छ। त्यहाँ केहि मापदण्डहरू छन् जुन गैर-नकारात्मक परिवर्तन अनुमान गरिएको छ:
दुबै परिवर्तनहरू आन्तरिक कारणहरूले गर्दा, रषलाई व्यवस्थित चोटको साथ देखा पर्न सक्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस्! अपीलको ठूलो प्रवाहको कारणले टेलिफोन लाइनमा अवरोधहरू सम्भव छ। अपरेटरसँग सञ्चारको लागि। हामी निश्चित रूपमा तपाईंलाई फिर्ता कल गर्नेछौं। Rinos अस्थायी असुविधाको लागि माफी माग्नुहोस्।
<< p> मोल्स बेनूएप्ट नेप्लामहरू हुन् जसले सामान्यतया मानिसहरूलाई कुनै समस्या पुर्याउँदैन। जे होस्, कहिलेकाँही तिनीहरू पुनर्जन्म गर्न सकिन्छ र घातक ट्यूमर परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आफैमा, यो तिरोधालय मालानोमा पुनर्जन्म हुन्छ। यो धेरै कारणले गर्दा हो।
मोल्सको पुनर्जजको कारणहरू
रोपेड स्पटहरू र मोल्सले अल्ट्राभाइयोलेटबाट विशेष रूपमा प्रभावित हुन्छ। यदि तिनीहरू कपडाहरूसँग असुरक्षित छन् भने अत्यधिक घामको मुनि सूर्यको रूपमा एक इमबमको रूपमा काम गर्न सक्दछ। सूर्यको चरिव र सोलारियलहरूमा अलबिलभाइयोलेट अन्यायकरणको लागि पनि खतरनाक छ।
थप, कक्षहरूमा परिवर्तनको कारणले मोललाई क्षति पुर्याउन सक्छ। -0-500% केसहरूमा, मेलानमीले विकास गर्न थाल्छ।
गर्भवती महिलाको शरीरमा हार्मोनल पेस्ट्रोका हो र यसले बेनूनियू नेप्लामहरूको पुनर्जन्मका लागि संयन्त्र पनि सुरू गर्न सक्छ। गर्भावस्थाको बखत महिलाले सबै परिवर्तनहरू नभई मोल्सको राज्य अनुसरण गर्नुपर्दछ।
मोल्सको पुनर्जन्मको लक्षणहरू
<< p> जब मोलेनियाले विनूनीबाट पुनर्स्थापना गर्न सुरू हुन्छ, यो ध्यान दिन सकिन्छ यदि तपाईं निम्न संकेतहरूमा ध्यान दिनुहोस्:
असमान र color ्ग; <
र color ्ग परिवर्तनहरू,
यसलाई आकारमा वृद्धि ; <
क्र्याकहरूको उपस्थिति, रक्तस्राव;
छाला बान्कीको परिवर्तन। / LI> << p> हाम्रो क्षेत्रमा लामो << p> सूर्यको विन्डोज वा कार को गिलास मार्फत चम्किन्छ, जो पक्कै पनि, एक राम्रो वसन्त को मुड को माध्यम बाट। जे होस्, सूर्यको किरणहरू, छालामा झर्दै रंग, फ्रेचुसन, freckles र मोल्स को गठन को कारण ... पछि थप कुरा गरौं
यौवन र गर्भावस्थाको समयमा, नयाँ जन्म पत्रहरू देखा पर्न सक्छन्, र पहिले नै अवस्थित कहिलेकाँही वृद्धि वा अँध्यारोमा छ।
अक्सर नयाँ मोल्सको उच्चारणबाट बच्ने कि नगर्ने भनेर सोध्नुहोस् कि? होईन, विपत्तिको संख्या अन्तरक्रियाको विकासको अवधिमा राखिएको छ। तपाईं उनीहरूको उपस्थितिको क्षण मात्र ढिलाइ गर्न सक्नुहुनेछ। मोल्सको सक्रियतामा मुख्य कारक - अल्ट्राभाइयोलेट। सूर्यको आविष्कार, मोल दुवै, र छिमेकी साइटहरू समान रूपमा खतरनाक छ, त्यसैले प्लास्टरमा केवल एक टुक्राको लागि व्यर्थ छ, यो अझै पनि छालाको छिमेकी क्षेत्रहरूबाट अलग हुन सक्छ।
मेलानोमा भागले असमान दुर्गन्धित किनारहरू, अशमोजन र color ्गमा, एक नियमको रूपमा कुनै व्यक्तिपरक संवेदनाहरू छैनन्।
raging, तिनीहरूले ट्यूमर को मात्रा मात्र वृद्धि गरेन। मोल्ल र रंगकुट दागको क्षेत्रमा, घातक कोषहरू पर्याप्त जोडिएको छैन भन्ने तथ्यको कारण तिनीहरू अनायाशबाट बाहिर निस्के। र "भाग्नु" शरीरमा, लिम्फ नोडहरू, लिम्फ नोडहरू, फोक्सो, आँखा, मस्तिष्क, मस्तिष्क मनपर्दो टिप्पणीहरू छन् ... केहि देशहरूमा यो दुई पटक हो तीन गुणा छ।
ठूलो महत्व, यस मामला मा, दागमा लगातार चोटपटक छ। मलानोमा अक्सर आत्म-काट्ने वा जल्दै गरेको खल्लू पछि हुन्छ। ईश्वरडक्त स्थानको आंशिककरण असक्षमता हुन सक्छ - घाँटीको घाँटी, ताडशाहीहरू, बॉनसेटेस स्पटहरू - शर्टको एक प्रयुक्त कलर द्वारा घाइते हुन्छन्। कहिलेकाँही melanoma घटना को लागी, त्यहाँ 1-2 चोट लाग्छ।
तर पुरानो भन्नुभएझैं: कसलाई चेतावनी दिइएको छ, उसलाई सशस्त्र लागेको छ! र यदि हामी मेलानमाको बारेमा हतियारहरू हौं भने, तब डरलाग्दो नतिजाहरूलाई रोक्न सकिन्छ। निदानबाट निदान अवस्थाको पछि र पछिको सबै केसहरूमा पर्याप्त उपचारमा बिरामीको पूर्ण रिकभरी समावेश छ।
सबै सामग्री il> तथ्यहरु संग उच्चतम सम्भव सटीकता र अनुपाल सुनिश्चित गर्न चिकित्सा विशेषज्ञहरु द्वारा जाँच गरीन्छ।
हामीसँग जानकारीको स्रोतहरू छनौट गर्नका लागि कडा नियमहरू छन् र हामी केवल आधिकारिक साइटहरू, शैक्षिक अनुसन्धान संक्षिप्त रूपमा सन्दर्भ गर्दछौं र सम्भव भएमा, सम्भव छ भने चिकित्सा अनुसन्धान प्रमाणित हुन्छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि कोष्ठकमा नम्बरहरू (, , आदि) त्यस्ता अध्ययनहरूलाई अन्तर्क्रियात्मक सन्दर्भहरू छन्।
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि हाम्रो कुनै पनि सामग्री गलत, पुरानो वा अन्यथा संदिग्ध छ भने, CTRL + ENTER थिच्नुहोस्।
<< p> गर्भावस्थाको क्रममा mools - गर्भावस्थामा भविष्यका आमाहरूमा चिन्ताको विषय।
<< p> यस अवधिमा प्रत्येक नेपलासम भनेको भावनाहरूको आँधीबेहरीको अवस्था हो भन्ने तथ्य होइन भन्ने तथ्य नै आतंकको लागि एनको छालाको अवस्था हो। र तुरून्तै, भावी आमा डाक्टरलाई चलाउँछिन्, वा पुस्तकहरूको पहाडहरू तोड्छ र यस विषयमा नेटवर्कमा स्ट्यानहरू तोड्छ।
जन्म गर्भावस्थाको बखत खतरनाक हुन्छ?
सामान्यतया, मोल्स पूर्ण रूपमा खतरनाक हुँदैन। स्वाभाविक रूपमा, यदि तिनीहरू बिरोध शिक्षा छन् भने। त्यसपछि तिनीहरूको संख्याको ठूलो संख्या अझै पनि चिन्ताको अवसर दिदैन। सचेत हुनुपर्ने कारण मालाको विकास, चतुनाको वृद्धि हुन सक्छ, छायाँ वा रंग परिवर्तन गर्दै, रक्तस्राव। यदि पहाडसँग बिन्ती गरेमा केहि अनौंठो परिवर्तनहरूले मात्र चिन्ता लिनु आवश्यक हुन्छ चिन्ता लिनु र राम्रो dermatico बाट निरीक्षण गर्न।
गर्भावस्थाको बखत जन्मको कारणहरू
नयाँ मोल को शरीरमा उपस्थिति प्राय: डराउँछ र तपाईंलाई खराबको बारेमा सोच्नुहुन्छ। वास्तवमा यो सामान्य घटना हो, विशेष गरी गर्भवती हुँदा, जब त्यहाँ सम्पूर्ण जीवको गम्भीर अनुच्छेद हुन्छ। यो सत्य हो कि कुनै पनि केसहरूमा, कल्ल मेट्नको लागि यो ठीक छ। तर यो गर्भवती हुन सक्छ? यस प्रश्नले भविष्यका आमाहरू चिन्ता गर्दछ।
<< p> यी एक व्यक्तिको छालामा थोरै गठनहरू गैर-नेलस भनिन्छ। हामी सबैको आफ्नै विशेष रंग छ। विशिष्ट कोषहरू छालाको छालामा मिल्छ - मेलानोनसाइटहरू। यदि यो एक सानो क्षेत्रमा धेरै जडान गर्दछ भने, त्यहाँ गाढा खैरो ठाउँ देखिन्छ। अधिक मेलानोसाइट्स - हाँगाहरू जोडिएको वा आवश्यक छ।
कहिलेकाँही आकार, साइज वा मोल्सको आकार वा रंग परिवर्तन सुरु हुन्छ। यो तत्वको कारण पनि होईन, तर यो अझै डाक्टर परामर्श लिइरहेको छ। प्राय: त्यस्ता परिवर्तनहरू नेभीको खतरनाक रीत्तरीको संकेत हुन्। गर्भावस्थाको बखत त्यस्तो परिवर्तनहरू प्रायः शरीरको हार्मोनरल पुनर्संररेटरको परिणाम हुन्छ।
त्यहाँ गैर-एकाइहरूको विभिन्न वर्गीकरणको ठूलो संख्यामा छन् - उनीहरूको फारम र आकारमा, उत्पत्ति र र color मोल्सको मुनि, हाम्रो मतलब सानो खैरो चेकहरू र आकार र टिन्टमा मात्र नभई मेलानोसासाका कक्षहरूको स्थानको गहिराई:
सामान्यतया मूलहरू हटाउने तिनीहरूको पुनर्जन्मको जोखिमको कारण मूलको हटाउने सल्लाहको लागि सिफारिश गरिन्छ वा जब तिनीहरू एक ककटिक कमजोरी हुन्छन्। Consmotic सूचकांक मा, कुनै पनि विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ - रोर्शेपूर्ण, लेजर, इलेक्ट्रोकोजिक, रावैजरी वा शल्य चिकित्सा हटाउने। जब ओर्कुलोजिकल अभिव्यक्तिहरू, एक शल्य विधि उपयुक्त छ, जसले नेभस आफै हटाउँदैन, तर यसको वरिपरिको छालाको मात्र छाला पनि।
मोल्ल हटाउने सबैभन्दा लोकप्रिय तरीका - लेजरसँग। यसले तपाईंलाई अपरेशनलाई धेरै सहि र चोटपटकको लागि चोटपटक र चोटपटक लागेका टिश्युहरू पार गर्न अनुमति दिन्छ।
सबै भन्दा अंकुरण क्रोकशक्ति को विधि हो। माफ गर्नुहोस् घाउ कपडा र गठनको हटाउने बिना नष्ट हुन्छ। तर त्यहाँ फलफूल हुँदैन यदि त्यहाँ ऑस्टिनोलोजिकल पुन: ईर्चको शंका छ, किनकि यसले हिस्टोलूजिकल परीक्षाको लागि फेब्रिकको नमूना दिदैन। इलेक्ट्रो-म्यापि त्यस्ता अवसरको हो, तर यो एकदम दखो हो र अक्सर दागहरूको गठन हुन्छ।
। मोल्स (विभिन्न आकार र रंगको छालामा शिक्षा) - दुबै जन्मबाट र जीवन भर देखा पर्दछ (यौवन वा गर्भावस्थाको बखत, क्युन्डाको शुरुआत; कहिलेकाँही बुढो उमेरका)। कसैले तिनीहरूलाई ध्यान दिएन, विशेष गरी यदि उनीहरूले गाडी चलाउँदा असुविधाको कारण गर्दैनन् र घाइते भएका छन्। केहि खुसी हुन्छन् छालामा धेरै संख्याको मोल्सको जोखिम हो। छालाको क्यान्सरको जोखिम हो। तसर्थ, प्रश्नको उत्तर - तिल खतरनाक छ वा छैन, धेरैलाई रोचक हुनेछ।
नेट (MOLLES) बेनुन छाला नेपलामहरू हुन्। अवतरण सपाट हुन सक्छ - छालाको सतहको रूपमा वा छालाको सतहमा टाँगिंगमा, मर्ट्स (असमान, बग्गी सतहको साथ) रंगमा फरक छ। आयामहरू विविध छन् - एक मिलिमिटर धेरै सेन्टिमिटरसम्म। आकारमा ठूलो, हामी प्राय जसो 12 वटा दैनिक जीवनमा प्राप्त गर्दछौं। यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ कि गिराईहरूको सतहलाई कपालले ढाक्न सकिन्छ। त्यहाँ हजमिली (भास्कुलर गठनहरू) चहकिलो रातो देखि गाढा बरगर्डीसम्म पनि छन्।
अक्सर छालामा neavys साथ पागीलोमास र जार्ट्स - भाइरल प्रकृतिको गठन (मानव पापेलोमा भाइरस)।
गर्भावस्था एक महिलाको जीवनमा विशेष समय हो, र धेरै जसो भविष्यका आमाहरू अत्यधिक चिन्ताहरू देखाउँछन्, जुन मोल्सको उपस्थिति हुन्छ।